Gaaffii uummattoota Kibbaa fi deebii Ministira Muummee - BBC News Afaan Oromoo
Torban darbe keessa walitti bu'iinsa Haawasaa, Walayittaa Sooddoo fi Walqixxeetti uumamee tureen lubbuun namoota kudhanii olii yoo darbu, kanneen hedduun immoo miidhaaf saaxilamaniiru. Qabeenyis barbadaa'u isaa maddeen ibsaniiru.
Haaluma kana tasigabbeessuuf jechas ministirri muummee Dr Abiiy Ahimad, Kibxata irraa kaasuun gara naannoo kibbaatti qajeeluun hawaasa magaalota adda addaa waliin marii taasisuu eegalaniiru.
Dhimmoota ejjoo marii jiraattonni godina Sidaamaa waliin taasifame irratti ka'an keessaa dhimmi gaaffii gara naannummaatti guddaachuu fi walitti bu'iinsi kabaja ayyaana jijjirraa waggaa haaraa Sidaamaa Canbalaalaa irratti ture isaan guddaa turan.
Kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti itti gaafatamaa ta'an seeratti akka dhiyaatan gaafatamu isaa godina Sidaamaatti ittigaafatamaan qajeelcha komunikeshinii Aadaafi Turizimii Obbo Jaaggoo Aganyaw BBC'tti himaniiru.
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahmad ammoo kanneen walitti bu'insicha keessaa harka qaban gaafatamuun isaanii hinollu isa naannootti guddana jedhu garuu itti yaaduun irratti mari'adhaa jadhaniiru.
Gaaffiin kunis gaaffii seeraa waan ta'eef deebii heeraa argachu qabaata kan jedhan, Ministirichi, garuu ummanni Sidaamaa gubbaa hanga dakkaatti sirriitti irratti mari'achu akka qabu Dr. Abiyj dubbachu Obbo Jaggoon himaniiru.
Dura erga ummanni mari'ate booda sadarkaa mootummaatiin akka irratti mari'atamu yaada kennaniiru jechuun dubbataniiru.
Kanaan alatti qaamoleen waldhabdee tibbanaa yeroo ayyaanni Cambalaalaa kabajametti qooda fudhatan seeratti haa dhihaatan jechuun jiraattonni gaafataniiru.
Hojii dhabdummaan akka furamuufi dhimmi siyaasaan kan biyyaa ba'anillee biyyatti akka deebi'an dhalattonni Sidaamaa gaafataniiru.
Ganama jiraattota magaalaa Hawaasaa waliin kan mari'atan Dr. Abiy waaree booda immoo gara Walaayitaa Soddoo deemuun ummata waliin mari'ataniiru.
Yunivarsiitii Walaayitaa Soddoo irraa marii har'aa irraatti kan hirmaatan barsiisaa Takattal Laamebaa BBC'tti akka dubbatanitti, namoonni hirmaatan gaaffii misoomaa qofaa hin gaafanne.
Akka isaan jedhanitti, Ummati Omotik walitti dhufee naannoo tokko haa ta'u kan jedhuufi bu'uraaleen misoomaa godina Sidaamaatti malee gara Walaayitaatti dhufaa hin jiru jechuun gaafataniiru.
Namoonni waldhabdee keessatti qooda fudhatan seeratti haa dhihaatan, kan miidhaman beenyaa haa argatan akkasumas kan qe'eerra buqqa'aan deeggarsi taasifameef haa debi'an kan jedhu Walaayitaa Soddottillee ka'eera.
Ministirri muummee deebii isaaniin gara caalu waldhabdee furuuf akka hojjetamu dubbatan jedhaniiru.
Keessumaa gaafa Jimaata galgala wanti magaalaa Hawaasaatti raawwate ministirri muummee miidiyaa biyyaalessaa irratti as bahani akka dubbatan kan dirqisiise ture.